दुवईमा भएका श्रीमानलाइ नेपालबाट श्रीमतीको संदेश, अन्तिम बिकल्प म तपाईकै घरमा गएर… – NepalajaMedia
दुवईमा भएका श्रीमानलाइ नेपालबाट श्रीमतीको संदेश, अन्तिम बिकल्प म तपाईकै घरमा गएर…
March 9, 2021 191
सबै कुरा नबुझि बिवाह गर्न हतार गर्दा परेको समस्याले एक महिलाले देह त्यागको प्रयास गरेकी छन् । मेरो विवाह भएको छैन । म अविवाहित हुँ भनेर युवतीसंग नजिकिए । उनीहरु बीच प्रेम भयो । युवती प्रेममा परिन् । उनीहरुले काठमाडौ आएर पशुपतिनाथ मन्दिरमा विवाह समेत गरे । तर अहिले ति युवकले उनलाई श्रीमती स्वीकार गरेनन् । अहिले एउटा सानो सन्तान पनि छ । तर उनले श्रीमती त स्वीकार गरेननन् छोरालाई सन्तान पनि स्वीकार गरेनन् ।
झापाको कन्काइ नगरपालिका ९ मा भएको यो घटनाले यि युवतीको जिवन अहिले बिचल्लीमा परेको छ । काठमाडौमा लगेर विवाह गरे, सन्तान जन्मियो अहिले उनी फेरी झापा आएर बसेकी छन् । श्रीमानले धोका दिएपछि अहिले ति युवती मिडियामा आएकी छन् । कमला भुषाल नाम बताउने ति महिलाले आफुलाई नहेरे पनि सन्तानलाई अधिकार दिलाउन लागेकी छन् ।
दुई वर्ष देखि मलाई यता न उता पारेर बिचल्ली बनाए, फोन गर्दा पनि चोकमा गएर मागेर खा भनेर जवाफ लगाउँछन्, उनले भनिन्, उनी साउदीमा छन् । उनले आफु ब्युटी पार्लर सिक्थिन् । त्यही बेलामा उनीहरुको भेट भयो । विवाह भएको उनीहरुबीच औपचारीक प्रमाण छैन । धेरै समय उनीहरु संगै बसे । त्यसवाट छोरा जन्मियो । पशुपतिमा दुई जनाले मात्र विवाह गरेका थिए । त्यसको प्रमाण आफुसंग नभएको युवतीको भनाई छ ।
त्यती बेला म संग मोवाइल थिएन, उनी आफै फोटो खिचेका थिए तर अहिले त्यो फोटो पनि डिलिट गरेका छन्, उनले भनिन् छोरालाई मेरो हो भनेर स्वीकार गरेकै छैनन् । गल्ती हामी दुवैले गर्र्यौ त्यसको सजाय मेरो छोरालाई किन दिनु ? दुवईमा संगै हुँदा पनि आफुले कमाएको सबै पैसा श्रीमानले नै राखेको बताउँछिन् । अहिले छोरा विरामी हुँदा पैसा दिनु भन्दा पनि दिन्नन् ।
Prevविनयजंग लाई पाँच वर्षसम्म कैद र एक लाखसम्म जरिवाना हुने
Nextदीपकले श्रीमतीलाई लेखे भावुक पत्र, भन्छन् ‘मेरा दुखमा धेरै आशु झार्‍यौ’
कोरोना बिमा : बिमितले पाएनन् भुक्तानी
लसुन खाए भाग्छन् यी रोगहरु
दाईसंगको बदला लिन प्रेमको नाटक गरी बहिनीसंग विवाह, सुत्केरी हुँदा पनि छोडेन (भिडियो हेर्नुस्)
अर्घाखाँचीमा यात्रुबहाक बस दुर्घटना : चालक सहित १२ जना घाइते
प्याजले यसरी बढाउन्छ घण्टौसम्म यौ’न आनन्द, कसरी प्रयोग गर्ने ? (14397)
यी ७ कुरा भुलेर पनि भगवानसँग नमाग्नुहोस, नत्र अशुभ हुनेछ ! (8338)
भोलिदेखि हिँडडुल गर्न समेत रोक (7796)
धन कमाएपछि अवश्य गर्नुहोस् यी ३ काम, नत्र हुन्छ धन नास (6432)
ज्योतिषविज्ञान भन्छ : यी महिना जन्मिने व्यक्ति करोडपति (5730)
भोलीबाट १० दिनसम्मका लागि लकडाउन गर्ने निर्णय (5354)
एक हप्ताका लागि सरकारी/गैरसरकारी संस्था, विद्यालय, पसल सबै बन्द हुने ! भर्खरै आयो यस्तो खबर ! (4750)
आज पनि ह्वात्तै घट्यो सुनको मूल्य, १ सातामै यति धेरै घट्यो सुनको मूल्य
आज बिहानदेखि राक्षस नामको संवत्सर सुरू, के हुन्छ असर ?
अविवाहित आमाबाट जन्मिएका हुन् यी ५ सेलेब्रेटी !
मोटोपनले डिप्रेसनमा पुगेकी मास्टर्नी, यसरी घटाईन २५ किलो तौल । (भिडियो सहित)
कोरोनाले निम्तिएको कहर: घाटमा ठाउँ छैन, एम्बुलेन्सबाट शव निकालेर सडकको बाटो मै राखियो, भारतको राँचीमा शवलाई बाटोमै जलाइँदै